Warshad Qalab - Soosaarayaasha Qalabka Shiinaha, Alaab-qeybiyeyaal
Ku ururso muunadaha mugga yar ee goobta si aad u hagaajiso xasaasiyadda kormeerka. Uruurinta wax ku oolka ah ee sunta jeermiska, fayrasyada, bakteeriyada, wasakhahaasi, manka, nabarrada, iwm. Adeegsiga hababka ogaanshaha bayoolojiga dhaqameed iyo molecular si wax ku ool loogu ogaado aerosols microbial ururiyay
GENECHECKER wuxuu qaatay khaanad gaar ah oo loo yaqaan 'polymer chip' (Rapi: chip TM) kaas oo awood u siinaya xitaa daweynta kuleylka ee dhaqso badan shaybaarada ku jira marka loo fiiriyo isticmaalka tubooyinka PCR ee qalabka PCR-ga caadiga ah. 8 ° C / sec xawaaraha xawaaraha waa la gaari karaa
Iyada oo ku saleysan horumarinta iyo kor u qaadista PCR sanado badan, oo ay weheliso fiicnaanshaha qalabka casriga ah, qaab dhismeedka iyo softiweerka, Molarray wuxuu soo saaray nidaam cusub oo waqtiga-dhabta ah ee nidaamka PCR-ka-MA-6000.
Chuangkun Biotech's CHK-16A waa nidaam tayo sare leh oo si buuxda otomaatig u ah soo saarista nidaamka-yar, cabirkiisuna yar yahay, waxaana lagu ridi karaa keyd nadiif ah ama gaari tijaabinaya oo mobiil ah; waxaa lagu wadi karaa batari banaanka ah si loogu baaro goobta;
Waqti dheer oo ku wareegsan waqtiga baaritaanka PCR iyo qalabkiisa culus iyo culus ayaa ahaa qodobbada muhiimka ah ee xaddidaya faafitaanka habkan ogaanshaha iyo xasaasiga ah ee xasaasiga ah ee codsiyada lagu ogaanayo daryeelka.